မြန်မာပြည်သူတွေကို လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိ ပေးအပ်နိုင်ရေး အာဆီယံရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို ဆက်လက် အားပေး ထောက်ခံမယ့် အကြောင်း အမေရိကန်- အာဆီယံ အထူး ထိပ်သီး အစည်းအဝေး အပြီး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်တွေ ဆုံးရှုံးရပြီး စစ်ရှောင်နေကြရသူတွေ အတွက် စာနာမှု အကူအညီ ရရေးက အရေးကြီးနေပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ် စီးပွားရေး အစီအစဉ်မှာ မသိင်္ဂီထိုက် တင်ပြထားပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း ထိခိုက်ရသလို ပုံမှန် ရောင်းဝယ်မှု အခြေအနေမျိုး မဟုတ်တော့ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်က အကူအညီပေးနေသူ တဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်ရင် ဆန် ရိက္ခာ များတယ်ဆိုရင် PDF ရိက္ခာလို့ စွပ်စွဲပြီး မီးရှို့တယ် ဖျက်စီးတယ်ဆိုတော့လေ တောင်သူတွေက သူတို့ ရတဲ့ စပါးတွေ ပဲတွေ မထားရဲတော့ဘူး။ အကုန် ထုတ်ပြီး ရောင်းကြတာ များတယ်။ ”
ဒါ့အပြင် ကျေးရွာတွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ PDF ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးကြရသူတွေဟာ တပိုင်တနိုင်ကူညီပေးနေသူတွေကို အားထားနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ တောင်သူတွေထံက ဆန်နဲ့ ဆီ ၀ယ်လို့ ရနိုင်နေသေးပေမယ့်လည်း ပြည်ပက သွင်းကုန်တွေ ကတော့ ရဖို့ ခက်သွားပြီလို့လည်း ကလေးမြို့ခံ အကူအညီ ပေးနေသူက ပြောပါတယ်။
“ အခု ဈေးကွက်မှာတော့ ဆန်က လွယ်သေးတယ်။ ပွဲစားဆီကနေ ပြန်ဝယ်မယ် ဆိုရင် ထိုးစစ် မ၀င်တဲ့ ရွာတွေက ဆန်ကြိတ်စက်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ ကြိတ်စက်တွေကနေ အခု ကျနော်တို့ ၂၈ ပိသာကို ၂၇၅၀၀ နဲ့ ၀ယ်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဆန် ပေါ့ဗျာ။ ဆီလည်း တောင်သူ အချင်းချင်းတော့ ၀ယ်လို့ ရသေးတယ်။ ကျန်တာတော့ မလွယ်တော့ဘူးဗျ။ ”
စစ်ရှောင်တွေကို အကူအညီ ပေးနေသူ အများစုက အလှူရှင်တွေကို အဓိက အားထားနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်မြေ ဒေသ အခြေအနေကြောင့် ရန်ပုံငွေ ရှိနေလည်း အကူအညီ ပေးနိုင်ရေးက မသေချာတဲ့ အခြေအနေပါလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
“ အလုပ်အကိုင်နဲ့ နေ့စဉ် ၀င်ငွေ မရှိတာနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရင် သူတို့တွေ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်။ ဒေသခံ ကူညီတဲ့ သူတွေကတော့ နိုင်သလောက်တော့ ကျနော်တို့ စုပေးထားတယ်။ သိပ်တော့ အများကြီးတော့ မစုနိုင်ဘူး။ စုတော့လည်း မြေကြီးထဲကို ကျင်းတူးပြီး ထည့်ရတာတို့ ဘာတို့ လုပ်ရတော့ အဲဒီ ဆန်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေက ကျတာပေါ့။ ကြာကြာမခံဘူး။ အပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့က အဲလိုတွေ ထိုးစစ်လာတာတွေ ဘာတွေ ဆိုရင် ဖျက်စီးတယ်။ ”
ဒါက ချင်းပြည်နယ် ဘက်က အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ အတူ စစ်ရှောင် အများအပြားလည်း ရှိနေတဲ့ ကရင်နဲ့ ကယား ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်း အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ AAC မဟာမိတ် အဖွဲ့ ဦးဆောင် တာဝန်ခံ ကိုရဲမင်းက လက်ရှိ အကူအညီ ပေးနေရတဲ့ အခြေအနေကို ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ ငွေကြေး အခက်အခဲကတော့ စစ်ရှောင် ပစ္စည်း ပို့တဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ ထိုင်းရောက် မိသားစုတွေ ပြည်ပရောက် အလှူရှင်တွေက လှူဒါန်းကြတာပေါ့နော်။ လှူဒါန်းကြတဲ့ ဟာတွေမှာ ပစ္စည်းတွေ တချို့ လိုအပ်တာတွေလည်း ၀ယ်ဖြည့်တာတွေ ရှိတယ်။ တချို့ကြလည်း အဆင်သင့် ၀ယ်ပြီးသားတွေ ရှိတယ်။ အဓိက ကတော့ ကားခပေါ့နော်။ ကားခကတော့ အဖွဲ့တွေက ၀ိုင်းပြီးတော့ စုပေါင်း စိုက်ထုတ်ရတာတွေ အဖွဲ့ ရန်ပုံငွေ ကနေ ကားခ ထုတ်ရတာတွေ။ အဲလို မျိုးပါဘဲ။ ထိုင်းဘက်ကတော့ အဆင်ပြေနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ အဓိက နယ်စပ် ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ တဖက် မြန်မာ ပြည်တွင်းကို ပို့ဖို့ ရာမှာဘဲ အခက်အခဲ ရှိတာပေါ့နော်။ ”
အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများ အသင်း အာဆီယံ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ရေး အတွက် စစ်ကောင်စီရဲ့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မေလ ၆ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ ကရင် ၊ ကယား ၊ စစ်ကိုင်း အပါအ၀င် ဒေသ ၅ ခုကို ပေးဖို့ ကနဦး လျာထားကြောင်း အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကမ္ဘောဒီးယား ဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn က ပြောဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Noeleen Heyzer ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စာနာထောက် ထားမှု အကူအညီပေးရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူအားလုံး လုံခြုံစိတ်ချပြီး အဟန့်အတားမရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AAC မဟာမိတ် အဖွဲ့ ဦးဆောင် တာဝန်ခံ ကိုရဲမင်းကတော့ စာနာမှု အကူအညီတွေ ပို့ဆောင်ရေးမှာ အခက်အခဲ ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ အခက်အခဲကတော့ ကျနော်တို့ စစ်ရှောင်တွေက မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာဘဲ ရှိတာလေ။ ရှိတော့ ကျနော်တို့ ထိုင်း နိုင်ငံဘက်ကတော့ ပစ္စည်း သယ်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းက သိပ် ပြသနာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နယ်စပ်ေ၇ာက်တဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ ဒီ တဖက် မြန်မာ ပိုင်နက်ထဲကို သောင်ရင်း မြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီးတော့ ပို့တာတို့ သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီးတော့ ပို့တာတို့မှာတော့ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်။ ”
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီတွေ ပေးအပ်နိုင်ရေး အတွက် အာဆီယံဘက်က စစ်ကောင်စီနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့သလို မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကလည်း NUG ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ စာနာမှု အကူအညီတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရေး အရေးကြီးတာကို နှစ်ဘက် တသဘောတည်း ရှိကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Saifuddin Abdullah က ပြောပါတယ်။
“လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေကို စစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပဲ လုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက အခိုင်အမာ ပါဝင်ဖို့လည်း မလေးရှားက အဆိုပြုထားပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်က ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။”
မဟာဗျူဟာနဲ့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး စင်တာ - CSIS ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အစီအစဉ်က မြန်မာ ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Michael Martin က အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်ခြင်း - RevisitingU.S. Policyin Myanmar ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ထုတ်တာမှာ စစ်ရှောင်တွေကို အကူအညီပေးနိုင်ရေး အတွက် အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ခိုက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ဖို့ အကြံပြုထားတာပါ။
စစ်ရှောင်တွေ အတွက် အဓိက ကတော့ နေ့စဉ်သုံး အခြေခံ လူသုံးကုန်နဲ့ ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးတွေ အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့လည်း AAC မဟာမိတ် အဖွဲ့ ဦးဆောင် တာဝန်ခံ ကိုရဲမင်းက ပြောပါတယ်။
“ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အရရော နောက် ကျနော်တို့ ဒီဘက်မှာ ရိက္ခာ ပစ္စည်းတွေ ရရှိမှု နည်းပါးမှုကြောင့်ရော မပို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ အခု လောလောဆယ်တော့ ကျနော် အဓိက ပို့ဖြစ်နေတာကတော့ လက်ရှိ လေးကေ့ကော် တိုက်ပွဲတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် စစ်ဘေး ရှောင်နေရသူ ၂၀၀၀၀ ကျော် ၃၀၀၀၀ ကျော် လောက် ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ မြ၀တီ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ စစ်ရှောင်တွေကို ကျနော် အဓိကထား ပို့ပေးနေပါတယ်။ ”
မွနျမာ အတှကျ အာဆီယံရဲ့ စာနာမှု အကူအညီ အလားအလာ
မွနျမာပွညျသူတှကေို လူသားခငျြးစာနာမှု အကူအညီတှေ ခှဲခွားဆကျဆံမှု မရှိ ပေးအပျနိုငျရေး အာဆီယံရဲ့ ကွိုးပမျးမှုကို ဆကျလကျ အားပေး ထောကျခံမယျ့ အကွောငျး အမရေိကနျ- အာဆီယံ အထူး ထိပျသီး အစညျးအဝေး အပွီး ပူးတှဲထုတျပွနျခကျြမှာဖျောပွပါတယျ။ နိုငျငံရေး အကွပျအတညျးကွောငျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး အလုပျအကိုငျတှေ ဆုံးရှုံးရပွီး စဈရှောငျနကွေရသူတှေ အတှကျ စာနာမှု အကူအညီ ရရေးက အရေးကွီးနပေါတယျ။ ဒီသီတငျးပတျ စီးပှားရေး အစီအစဉျမှာ မသိင်ျဂီထိုကျ တငျပွထားပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ စိုကျပြိုးရေး ထုတျလုပျရေး လုပျငနျးတှလေညျး ထိခိုကျရသလို ပုံမှနျ ရောငျးဝယျမှု အခွအေနမြေိုး မဟုတျတော့ကွောငျး ခငျြးပွညျနယျက အကူအညီပေးနသေူ တဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ စဈတပျက ထိုးစဈဆငျရငျ ဆနျ ရိက်ခာ မြားတယျဆိုရငျ PDF ရိက်ခာလို့ စှပျစှဲပွီး မီးရှို့တယျ ဖကျြစီးတယျဆိုတော့လေ တောငျသူတှကေ သူတို့ ရတဲ့ စပါးတှေ ပဲတှေ မထားရဲတော့ဘူး။ အကုနျ ထုတျပွီး ရောငျးကွတာ မြားတယျ။ ”
ဒါ့အပွငျ ကြေးရှာတှမှော စဈတပျနဲ့ PDF ကွား တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးကွရသူတှဟော တပိုငျတနိုငျကူညီပေးနသေူတှကေို အားထားနကွေရတာ ဖွဈပါတယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ တောငျသူတှထေံက ဆနျနဲ့ ဆီ ဝယျလို့ ရနိုငျနသေေးပမေယျ့လညျး ပွညျပက သှငျးကုနျတှေ ကတော့ ရဖို့ ခကျသှားပွီလို့လညျး ကလေးမွို့ခံ အကူအညီ ပေးနသေူက ပွောပါတယျ။
“ အခု ဈေးကှကျမှာတော့ ဆနျက လှယျသေးတယျ။ ပှဲစားဆီကနေ ပွနျဝယျမယျ ဆိုရငျ ထိုးစဈ မဝငျတဲ့ ရှာတှကေ ဆနျကွိတျစကျတှေ ရှိတယျ။ အဲဒီ ကွိတျစကျတှကေနေ အခု ကနြျောတို့ ၂၈ ပိသာကို ၂၇၅၀၀ နဲ့ ဝယျလို့ ရပါသေးတယျ။ ဆနျ ပေါ့ဗြာ။ ဆီလညျး တောငျသူ အခငျြးခငျြးတော့ ဝယျလို့ ရသေးတယျ။ ကနျြတာတော့ မလှယျတော့ဘူးဗြ။ ”
စဈရှောငျတှကေို အကူအညီ ပေးနသေူ အမြားစုက အလှူရှငျတှကေို အဓိက အားထားနကွေရတာ ဖွဈပါတယျ။ နယျမွေ ဒသေ အခွအေနကွေောငျ့ ရနျပုံငှေ ရှိနလေညျး အကူအညီ ပေးနိုငျရေးက မသခြောတဲ့ အခွအေနပေါလို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။
“ အလုပျအကိုငျနဲ့ နစေ့ဉျ ဝငျငှေ မရှိတာနဲ့ ဖွဈခဲ့ရငျ သူတို့တှေ အခကျအခဲ ရှိနိုငျတယျ။ ဒသေခံ ကူညီတဲ့ သူတှကေတော့ နိုငျသလောကျတော့ ကနြျောတို့ စုပေးထားတယျ။ သိပျတော့ အမြားကွီးတော့ မစုနိုငျဘူး။ စုတော့လညျး မွကွေီးထဲကို ကငျြးတူးပွီး ထညျ့ရတာတို့ ဘာတို့ လုပျရတော့ အဲဒီ ဆနျရဲ့ အရညျအသှေးတှကေ ကတြာပေါ့။ ကွာကွာမခံဘူး။ အပျေါထားမယျဆိုရငျလညျး သူတို့က အဲလိုတှေ ထိုးစဈလာတာတှေ ဘာတှေ ဆိုရငျ ဖကျြစီးတယျ။ ”
ဒါက ခငျြးပွညျနယျ ဘကျက အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ တိုကျပှဲတှနေဲ့ အတူ စဈရှောငျ အမြားအပွားလညျး ရှိနတေဲ့ ကရငျနဲ့ ကယား ပွညျနယျတှငျးမှာလညျး အကူအညီပေးရေး လုပျငနျးတှမှော အခကျအခဲတှေ ရှိနပေါတယျ။ AAC မဟာမိတျ အဖှဲ့ ဦးဆောငျ တာဝနျခံ ကိုရဲမငျးက လကျရှိ အကူအညီ ပေးနရေတဲ့ အခွအေနကေို ဗှီအိုအကေို အခုလို ပွောပါတယျ။
“ ငှကွေေး အခကျအခဲကတော့ စဈရှောငျ ပစ်စညျး ပို့တဲ့ အခါမှာ ကနြျောတို့ ထိုငျးရောကျ မိသားစုတှေ ပွညျပရောကျ အလှူရှငျတှကေ လှူဒါနျးကွတာပေါ့နျော။ လှူဒါနျးကွတဲ့ ဟာတှမှော ပစ်စညျးတှေ တခြို့ လိုအပျတာတှလေညျး ဝယျဖွညျ့တာတှေ ရှိတယျ။ တခြို့ကွလညျး အဆငျသငျ့ ဝယျပွီးသားတှေ ရှိတယျ။ အဓိက ကတော့ ကားခပေါ့နျော။ ကားခကတော့ အဖှဲ့တှကေ ဝိုငျးပွီးတော့ စုပေါငျး စိုကျထုတျရတာတှေ အဖှဲ့ ရနျပုံငှေ ကနေ ကားခ ထုတျရတာတှေ။ အဲလို မြိုးပါဘဲ။ ထိုငျးဘကျကတော့ အဆငျပွနေတေဲ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။ အဓိက နယျစပျ ရောကျသှားတဲ့ အခြိနျမှာ တဖကျ မွနျမာ ပွညျတှငျးကို ပို့ဖို့ ရာမှာဘဲ အခကျအခဲ ရှိတာပေါ့နျော။ ”
အရှတေ့ောငျ အာရှ နိုငျငံမြား အသငျး အာဆီယံ ရဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူသားခငျြး စာနာမှု အကူအညီတှေ ပေးနိုငျရေး အတှကျ စဈကောငျစီရဲ့ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဦးကိုကိုလှိုငျ တကျရောကျခဲ့တဲ့ မလေ ၆ ရကျနကေ့ ဆှေးနှေးပှဲမှာတော့ ကရငျ ၊ ကယား ၊ စဈကိုငျး အပါအဝငျ ဒသေ ၅ ခုကို ပေးဖို့ ကနဦး လြာထားကွောငျး အာဆီယံ အထူးကိုယျစားလှယျ ကမ်ဘောဒီးယား ဒုဝနျကွီးခြုပျနဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Prak Sokhonn က ပွောဆိုထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျ Noeleen Heyzer ကတော့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး စာနာထောကျ ထားမှု အကူအညီပေးရေး ပါဝငျဆောငျရှကျနသေူအားလုံး လုံခွုံစိတျခပြွီး အဟနျ့အတားမရှိ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ အရေးကွီးတဲ့အကွောငျး ကွညောခကျြ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ AAC မဟာမိတျ အဖှဲ့ ဦးဆောငျ တာဝနျခံ ကိုရဲမငျးကတော့ စာနာမှု အကူအညီတှေ ပို့ဆောငျရေးမှာ အခကျအခဲ ရှိကွောငျး ပွောပါတယျ။
“ အခကျအခဲကတော့ ကနြျောတို့ စဈရှောငျတှကေ မွနျမာဘကျခွမျးမှာဘဲ ရှိတာလေ။ ရှိတော့ ကနြျောတို့ ထိုငျး နိုငျငံဘကျကတော့ ပစ်စညျး သယျလာတဲ့ လမျးကွောငျးက သိပျ ပွသနာ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ နယျစပျ ရောကျတဲ့ အခါမှာ ကနြျောတို့ ဒီ တဖကျ မွနျမာ ပိုငျနကျထဲကို သောငျရငျး မွဈကို ဖွတျကူးပွီးတော့ ပို့တာတို့ သံလှငျမွဈကို ဖွတျကူးပွီးတော့ ပို့တာတို့မှာတော့ အခကျအခဲတှေ ရှိတယျ။ ”
မွနျမာနိုငျငံတှငျး လူသားခငျြး စာနာမှု အကူအညီတှေ ပေးအပျနိုငျရေး အတှကျ အာဆီယံဘကျက စဈကောငျစီနဲ့ ဆှေးနှေးခဲ့သလို မလေးရှား နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးကလညျး NUG ရဲ့ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး ဒျေါဇငျမာအောငျနဲ့ ဆှေးနှေးထားပါတယျ။ စာနာမှု အကူအညီတှဟော ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိရေး အရေးကွီးတာကို နှဈဘကျ တသဘောတညျး ရှိကွောငျး မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Saifuddin Abdullah က ပွောပါတယျ။
“လူသားခငျြးစာနာမှု အကူအညီပေးရေး လုပျငနျးတှကေို စဈအာဏာပိုငျတှနေဲ့ပဲ လုပျလို့မဖွဈပါဘူး။ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးက အခိုငျအမာ ပါဝငျဖို့လညျး မလေးရှားက အဆိုပွုထားပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ကွီးကွပျမှုအောကျက ဆောငျရှကျဖို့ပါ။”
မဟာဗြူဟာနဲ့ နိုငျငံတကာ လလေ့ာရေး စငျတာ - CSIS ရဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှ အစီအစဉျက မွနျမာ ဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူ Michael Martin က အမရေိကနျရဲ့ မွနျမာဆိုငျရာ မူဝါဒ ပွနျသုံးသပျခွငျး - RevisitingU.S. Policyin Myanmar ဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြကို စကျတငျဘာလ ၂၄ ရကျနကေ့ ထုတျတာမှာ စဈရှောငျတှကေို အကူအညီပေးနိုငျရေး အတှကျ အကူအညီပေးရေး အဖှဲ့တှနေဲ့ တိုကျခိုကျ ခြိတျဆကျ ဆောငျရှကျဖို့ အကွံပွုထားတာပါ။
စဈရှောငျတှေ အတှကျ အဓိက ကတော့ နစေ့ဉျသုံး အခွခေံ လူသုံးကုနျနဲ့ ရိက်ခာ၊ ဆေးဝါးတှေ အလိုအပျဆုံး ဖွဈတယျလို့လညျး AAC မဟာမိတျ အဖှဲ့ ဦးဆောငျ တာဝနျခံ ကိုရဲမငျးက ပွောပါတယျ။
“ လမျးပနျး ဆကျသှယျရေး အရရော နောကျ ကနြျောတို့ ဒီဘကျမှာ ရိက်ခာ ပစ်စညျးတှေ ရရှိမှု နညျးပါးမှုကွောငျ့ရော မပို့ဖွဈဘူးပေါ့နျော။ အခု လောလောဆယျတော့ ကနြျော အဓိက ပို့ဖွဈနတောကတော့ လကျရှိ လေးကကေ့ျော တိုကျပှဲတှရေဲ့ ရိုကျခတျမှုကွောငျ့ စဈဘေး ရှောငျနရေသူ ၂၀၀၀၀ ကြျော ၃၀၀၀၀ ကြျော လောကျ ရှိတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီ မွဝတီ တောငျဘကျခွမျးမှာ ရှိတဲ့ စဈရှောငျတှကေို ကနြျော အဓိကထား ပို့ပေးနပေါတယျ။ ”